ဗနီဂါ ( vinegar ) လို့ ပြောပြီး နေရာတိုင်းဝယ်လို့ ရတယ်လေ။
thanksalot wutyi yay
Plz also try it.. It is good noodle fry.. 🙂
May Thalinn says:
Thanks for your knowledge Hay Mar, because I want to use “pa ohn yay ” but not here.
I just read your comment and I see palm vinegar. I will try it.
Thanks for your sharing Wutyee
Manilar Lwin says:
အမရေ ပချူထမင်းကြော်လေးတင်ပေးပါလား ကျန်တာလေးတွေလုပ်စာဖြစ်တယ်အန
Thanks Ma Wutyee’
I really know how to prepare and cook.
ရှာလကာရည်ထည့်တဲ့သဘောက အအီပြေအောင်လို့ အချဉ်ရည်ထည့်တာပေါ့နော်။
လုပ်စားအုံးမယ်… မရေ… ဒါလေးကိုသိမ်းထားချင်လို့ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ… facebook မှာ share လုပ်ထားချင်တာ …. သိရင်ပြောပေးပါနော် မ….
file->save as နဲ့ပဲ သိမ်းထားလို့ရတယ် ညီမ။ ဖေ့ဘုတ်မှာတော့ ရှယ်လုပ်လို့ ရဘူးထင်တယ်…
ပအုန်ေ၇ဆိုတာ. ဓနိရေကို အချဉ်ဖေါက်ထားတာပါ
ကတ်ကြေးကိုက်က ပအုန်းရေ နဲမှပိုပြီမွေးတာပါ…
Diet par so ma bae… my favourite lay yayyy ….yangon pyan mar bae pig yee ko lote khine ya mal heee… wanna eatalot now… 😐 yuummyyyyyyyy
ဟားဟား ကိုယ်ကို ရန်ကုန်ပြန်လာရင် ကျွေးရမယ့်ဟင်း နောက်တခုတိုးလာပြီ.. 🙂
moe thandar myint says:
i want to log in to ur web site.
but i don’t know how to do.pls send mail how to do.
thanks u so much for ur sharing…
You don’t need to login. Just scribe email subscription. It will send email, when new recipe post. Thanks! 🙂
sea food က၀င့်ဝါနဲ့မတည့်ဘူးလေတခြားဘာနဲ့လုပ်လို့ရနိူင်မလဲပြောပြပေးပါနော်
ပင်လယ်စာ မကြိုက်ရင် ကြက်သား(သို့)၀က်သား၊ ၀က်အူချောင်း၊ တို့နဲ့လည်း လုပ်စားလို့ရပါတယ် sis
မ၀တ်ရည်ရေ မြိတ်ကပ်ကြေးကိုက်လုပ်နည်းလေးရတဲ့ အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။သမီးနဲ့ အမျိုးသားကသိပ်ကြိုက်တာလုပ်
ဟုတ်ကဲ့ လုပ်စားကြည့်ပါနော်။ ဟုတ်၊ တင်ပေးပါ့မယ်
အစ်မရေ oven နဲ.ပတ်သက်ပြီး သုံးပုံသုံးနည်းလေးရေးမယ်ဆို မျှော်နေပါတယ်နော်၊ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ဟုတ်ကဲ့။ Oven သုံးပုံသုံးနည်းလေး ဆောင်ပါးလေး ရေပေးဖို့ လုပ်ထားပါတယ်။ မအားသေးလို့။ အားတာနဲ့ တင်ပေးပါ့မယ်…
cynthia trindade says:
i’m from india but lived in yangon for many years. i would like to know what id snow chicken powder? and what is the substitude for it.
You mean ခနော chicken powder? I use it for more flavor in curry. If you don’t want to add, you dont’ add it. Thanks
Hi Ma Wutyee, Thank you so much for this recipe. Will try to cook this Sat.
Moh Jazy says:
Ar Ma…” pal pyote” lote nee layy tin payy ber larrr hin
d mhar ” pal pyote ” mat ya lo’
thank u so so much Ar Ma
ပဲပြုတ်လုပ်နည်းကို ဒီလင့်မှာ http://www.wutyeefoodhouse.com/?p=2269 ရေးထားပါတယ်..
ဝတ်ရည် ရေ ကျေဇူးပါ နောက်ထပ် လှည်းတန်းမှာ
ဝတ်ရည်ရဲ့စာအုပ်ထွက်တာ TV မှာပါလို့သိလိုက်ပါတယ်
၀တ်ရည် ဟင်းချက်နည်း ၁၀၁မျိုးစာအုပ်ကို စာအုပ်ဆိုင်တော်တော်များများမှာ ၀ယ်လို့ရပါတယ်။ ငါးကင်လုပ်နည်းလေးလည်း ကြိုးစားတင်ပေးပါ့မယ်.. ကျေးဇူးပါ
၀တ်ရည်ရေ အစ်မကမြိတ်ကတ်ကြေးကိုက်ကိုသိပ်ကြိုက်တာ။ငယ်ငယ်ကကော့သောင်းမှာနေခဲ့ဘူးတယ်လေ။အဲဒီမှာမြိတ်အစားအစာတွေကိုသိပ်ကြိုက်ခဲ့တာပေါ့။ကတ်ကြေးကိုက်ကိုနေ့တိုင်းစားရလည်းမမုန်းဘူးလေ။ ဒါပေမယ့်ကိုယ်တိုင်မလုပ်တတ်ဘူး။ခုတော့ကျွန်မသိပြီ 🙂
I also like it very much! 🙂
ဟုတ် ရှာလကာရည်နဲ့ဆိုလည်း စားလို့ကောင်းပါတယ်
Ko min thu says:
ကျေးဇူးအရမ်းတင်ပါတယ်။ နောက်လည်း ထူးထူးခြားခြား အစားအသောက်လေးတွေရှာပြီးပြန်သင်ပေးပါဦးဗျာ
Hi thanks for sharing the recipe.I am going to try this weekend.H
can you give the recipe to do the accompanying sauce.With magyithee ?
ခွက်ထဲ ထိုင်းငရုတ်သီးဆော့၊ သခွာသီး(ပါးပါးလှီးပါ)ထည့်ပါ။ တချို့လည်း ပဲပင်ပေါက် ရေနွေးဖျော်ပြီ အချဉ်လုပ်ပါတယ်။
အမြဲတန်းမှတ်မိနေပြီးစားချင်နေမိတာကဒီမြိတ်ကတ်ကြေးကိုက်ပဲ ကော့သောင်းမြို့ ကဘုရင့်နောင်ကုန်းလေးမှာအမြဲတန်းသွားစားဖြစ်တယ်စပ်စပ်လေးအရမ်းကြိုက်တယ်
ပုဇွန် တမျိုးထဲ ဆိုလည်း အဆင်ပြေပါတယ်… 🙂
Thanking ma wutt yee,
I really love to cook, i don’t know i have to put receipts that’s why this is no taste for my cookin. but, when i saw your web-site, really i was enjoy and i got knowledges more and more. Every weekend, i opened your website and check it what I have to cook special. Now, I was enjoy with your site and everyday i check. Thanking in advance and hoping to eat your taste when I come back to Myanmar. You are very perfect cooking myanmar lady. your family were very lucky and I really envy you…. 😛
You r so welcome!! Thank you too 😀
ဟုတ်ကဲ့ လုပ်စားကြည့်ပါနော်… 🙂
Aung naing aye says:
ပုဇွန်ကို မထဲ့ ရင်ရလာ။ ကြက်သားဘဲထည့်ရင်ရမလာ ခင်ဗျား။
ပင်လယ်စာနဲ့ မဟုတ်ပဲ၊ ကြက်သားနဲ့လည်း ချက်လို့ရပါတယ်..
sis, i will cook with your way for the monks. thank you so much sis. wishing you happy, healthy and prosperity. love you
စား​ကောင်းမယ့်​ပုံပဲ သ​ရေကျပီ ပြန်​သွားတယ်​
Buck Danny - L'intÃ©grale - tome7- Buck Danny7(intÃ©grale) 1958 - 1960 says:
Zwe Maung says:
ကျွန်တော်က မမရဲ့ website ကို အခုမှသိတာပါ
မမကိုလူပြောများနေတယ် ဒါနဲ့ ဝင်ကြည့်ဖြစ်တာပါ
မမကအရမ်းတော်တယ်နော် အခုလို မမသိထားသမျှတွေshare ပေးတာအရမ်းအရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်
မမကို fb မှာ shareလပ်ပေးပါအုန်းမမ
Lin Tint says:
what is “kat kyae kite mote phat”, Is it same with mon hin khar phat or Kuey teow? Pls reply me. My mum love to eat. I wanna cook for her. Thx in advance.
There isacritical shortage of inmoafrtive articles like this.
Soy profesor de Lengua y Literatura Castellana en un colegio de Caracas-Venezuela y me gustarÃ­a iraenseÃ±ar el Castellano o EspaÃ±olalas Filipinas. Esta regiÃ³n fue colonia espaÃ±ola, pero en siglo XIX los Estados Unidos se la anexaron y lamentablemente entre 1973a1974 la lengua castellana suprimida de los proyectos educativos. En verdad me encantarÃ­a trabajar con el Instituto Cervantes en la resurrecciÃ³n del espaÃ±ol en ese paÃ­s asiÃ¡tico.